M hụrụ n'anya na ndị enyi | Apg29
M hụrụ n'anya na ndị enyi
Ekweghị na ndị ọbịa bịara kpọrọ anyị. Ọ bụghị eziokwu.
Ọ na-agbasa ebe "hapụrụ akwụkwọ ozi" USA. A akwụkwọ ozi izipu ha hụrụ n'anya bụ ndị na-abụghị Ndị Kraịst na-enyere ha aka inweta ihe ọmụma nke na-abịa n'ụbọchị mgbe owuwe nwere ike ime eme. M natara akwụkwọ ozi a si agụ onye a sụgharịrị Swedish na m ga-ebipụta ya ebe a.
M hụrụ n'anya na ndị enyi.
The ọmụma m na-eziga bụ banyere owuwe nke ụka na m kwere na obi m nile dị nso.
1 Nke 4: 13-18
13. Ma m ga-adịghị, umu-nnam, ka unu ghara ịma ihe banyere ndị dara n'ụra, na unu na-ekwesịghị iwe iwe dị ka ndị ọzọ na nke na-enweghị olileanya.
14. N'ihi na ọ bụrụ na anyị kwenyere na Jizọs nwụrụ ma bilie ọzọ, otú ahụkwa ka Chineke ga-eme ndị dara n'ụra Jesus ya.
15. N'ihi na nke a anyị na-agwa unu site n'okwu Jehova, na anyị nke dị ndụ ma na-anọgide na-abịa nke Jehova, ihe ọ bụla ga-abịa n'ihu ndị dara n'ụra.
16. N'ihi na Jehova n'onwe ya ga-ịgbada heaven na a na-enye iwu nkpu, were olu onyeisi ndị mmụọ ozi na na opi oku nke Chineke, na mbụ na ndị nwụrụ anwụ na Kraịst ga-ebili.
17. Mgbe ahụ, anyị nke dị ndụ ma na-anọgide ga-ejide elu ọnụ na ha na n'ígwé ojii izute Onyenwe anyị na ikuku. Ya mere, anyị ga-enwe mgbe nile na Jehova.
18. Ya mere na-akwado ibe okwu ndị a.
Na a oge, na 1/40 nke a nke abụọ, ndị na-nyefere ndụ ha na natara Jesus Kraịst dị ka Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta ga-apụ n'anya si n'ụwa a, na a ga-eme n'oge ọ bụla. Olee otú ị pụrụ isi mara n'ezie na ị na-echekwa?
Ndị Rom 10: 9-10
9. N'ihi na ọ bụrụ na ị na-ekwupụtara na ọnụ gị na Jizọs bụ Onyenwe na obi gị kwere na Chineke kpọlitere ya n'ọnwụ, ị ga-azọpụta.
10. N'ihi na obi okwukwe bụ ezi omume; na-ejikwa onu kwuputa ga-azọpụta.
Aga chọọchị, na-eje ozi na-eme ezi ihe na-agaghị azọpụta gị. Ị na-adịghị azọpụta site ezi ọrụ, ị na-echekwa maka ọrụ ọma. Iji a "ezigbo mmadụ" anaghị zọpụta gị. Gị onwe gị aghaghị anakwere Jizọs dị ka Onye Nzọpụta gị. E nwere ọtụtụ amaokwu Akwụkwọ Nsọ na nke a. Ọtụtụ n'ime unu nụrụ banyere owuwe "owuwe" na ọbụna ụfọdụ chere ma ọ sịrị, "ọ bụrụ na ọ na-eme m ga-chegharịa ma chigharịkwuru Kraịst dị ka".
Ka m kọwaa ihe bụ ihe na-eme na-adịghị anya. Ezie na Bible na-ekwu na anyị amaghị ụbọchị ma ọ bụ oge awa, o doro anya na anyị na-aghọta na oge na anyị na-na-na ikpeazụ na oge na njedebe nke ụbọchị ndị a. N'oge na-adịghị, na-ezi ndị kwere ekwe ga-ejide elu "-ezute Kraist".
Were, ma ọ bụrụ na ị ga-, na ọtụtụ nde ma ọ bụ ọbụna a ijeri mmadụ akwụsị ihu nke ụwa. Ụgbọelu mkpọka, mkpọka ụgbọala, niile ụmụ nwaanyị dị ime aba ime n'ihi na ha bu n'afọ ụmụaka na-anapụta ukwuu ọgba aghara.
Mgbe nke a mere, ị maara na "owuwe" ka mere na ị hapụrụ. Ekweghị na ndị ọbịa bịara kpọrọ anyị. Ọ bụghị eziokwu.
Ma a ka nwere olileanya. First ... Ejila ihe ọ bụla mara nke ụdị ọ bụla na egedege ihu gị ma ọ bụ na aka n'agbanyeghị ihe. Ọ bụrụ na ị na-eme, i nwere ike-azọpụta ma na-efu ruo mgbe ebighị ebi.
Ugbu a ihe ga-pụọ. Na-emegide Kraịst ga-abịa na ogbo na-eme ka hà na-ezi ihe na-enye aka eme ka ihe niile ziri ezi ọzọ. Ọ ga-egosi a udo nkwekorita na Israel, na a ga-enwe udo n'ụwa maka a obere oge. Ọ ga-abụ a nnukwu aghụghọ atọ na ọkara afọ tupu oké mkpagbu nke atọ na ọkara afọ. The dum afọ asaa mkpagbu bụ ... nke ga-jọgburu onwe.
Atọgbọ ndụ gị na Jizọs Kraịst ugbu a. Nabata Ya dị ka Onyenwe gị na Onye Nzọpụta. Nke a bụ gị nanị olileanya. Dị mwute ikwu na, eleghị anya ị ga-isi ma ọ bụrụ na ha enwetaghị gị, ma ị ga na-ajụ-akara nke anụ ọhịa ahụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ị ga-eji mgbe ebighị ebi na hel. Nke a bụ nnọọ njọ.
Na-emegide Kraịst ga-mejuputa a ụwa iji na akara nke anụ ọhịa. Ị ga-enwe ike ịzụta ma ọ bụ na-ere na-enweghị ihe a akara. M ike kwere na ika nwere ike ịbụ RFID ibe ke ọkpọiso ma ọ bụ aka nri, ma ọ bụ a mbibi nke ụdị ọ bụla na-apụghị wepụrụ. M na-kweere na ọ ga-agbanwe gị DNA. Dị nnọọ ka Nefilim, adọ ụdị ụfọdụ nke dara mmụọ ozi na ndị inyom si Jenesis isi isii gbanwere ha DNA. Mark nke anụ ọhịa ga-eme otu ihe ahụ.
The Vatican nwere lucifa ngo / teliskop na Ugwu Graham na Arizona ebe ha kọrọ na kọntaktị na ọbịa na ọgụgụ isi. Ha na-adịghị ka ndị ọbịa. E nweghị ndị na ọbịa. Ha na-mmụọ ozi ahụ nupụrụ.
Ọ bụrụ na ị na-anabata Jizọs na-anwụ, ị ga-eji mgbe ebighị ebi na hel. Ma ọ bụrụ na ị na-akara nke anụ ọhịa ahụ, ị ​​na-idikwe ruo mgbe ebighị ebi na-enweghị olileanya. Ị ga-anọ ebighi ebi na hel.
N'ihi na ọ bụrụ na ị na-ekwupụtara na ọnụ gị na Jizọs bụ Onyenwe na obi gị kwere na Chineke kpọlitere ya n'ọnwụ, ị ga-azọpụta.
N'ihi na obi okwukwe bụ ezi omume; na-ejikwa onu kwuputa ga-azọpụta.
Kwere na Jizọs. Nabata Ya free onyinye nke nzoputa. Jụọ na-enweta ugbu a, Jizọs.
Jụọ ihe dị ka:
"Jesus, m na-aghọta na mụ onwe m bụ onye mmehie. M kwere na unu nwụrụ maka mmehie m. M na-anabata gị dị ka Onye Nzọpụta m. Jizọs aha, amen."
M na-arịọ ngọzi Ya na ị na-na na ị niile na-abịa na-azọpụta ihe ọmụma nke Jesus.
Na-atụ anya izute gị heaven.
N'anya na Kristus❣️
Nke a bụ a na-agụ email, onye echiche na-ede akwụkwọ si onwe.